कन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो) – Namaste Host
February 13, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कन्चनको अ’बस्थालाई लिएर नि’राश हुदै बोले डाक्टर प्रदिप, नि’कै दु’ख लागेको छ ! (हेर्नुस् भिडियो)
चितवनमा भएको एउटा घट,नाले अहिले सबैको ध्या,न तानेको छ । सानै उमेरमा प्रेममा परेका जोडीको वियोगान्त अवस्थाले युवक जिवनको दोसाँधमा छन् भने एउटै गाउँका दुई परिवारबीच दु,स्मनीको अवस्था आएको छ ।
१७ वर्षकी युवती र २१ वर्षका युवक एक अर्कालाई प्रेम गर्थे । उनीहरुले विवाह पनि गरे । तर परिवारले उनीहरुको विवाह स्वीकार गर्न नसकेका कारण युवतीले आफ्नो वयान फेरीन् ।
यु,वकसंग चितवन देखि काठमाडौं पुगेर युवकको आमाको अगाडी विवाह गरेकी यु,वती अर्को दिन माइत फर्किए पछि मलाई दवावमा पारेर विवाह गरियो भने पछि युवकले सहन सकेनन् । भिडियोमा आएका युवक र युवतीबीचको म्यासेन्जरमा भएका कुराकानीका आधारमा परिवारको द,वावमा आएर युव,तीले वयान फेरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
युवतीकै लागि आमाबुवा, संस्कार र धर्म समेत छोडेका युवकले युवतीको बदलिएको ब्यवहार सहन नसकेर वि ष से व न गरेका छन् । उनी अस्पतालमा उपचारार्थ छन् । घट,ना भएको चार दिन सम्म पनि उनको होस आएको छैन । युवतीको प्रेममा परेका २१ वर्षका युवक कञ्चनले यु,वतीकै धर्म अंगाले । उनी क्रि,श्चियन धर्म परिवर्तन गरेका कारणा धार्मीक कलेज समेत छोडेका थिए ।
युवतीकै लागि परिवारलाई पनि कन्भिन्स गरेका थिए । मेरो खुसी नै अनिशा हो त्यसैले मेरो प्रेम स्वीकार गर्नु भन्दै आमालाई उनले सम्झाएका थिए । त्यसैले छोराको लागि आमाले सबैकुरा स्वीकार गरिन् तर अहिले उही युवतीका कारण छोरा जिवनसंग सं,घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
भि,डियो हेर्दा पनि फिल्मको कथा जस्तो लाग्ने वास्तविक घट,नाको रो,चक कुरा त के छ भने आफु त्यस्तो अवस्थामा पुगेका ति कञ्चनले यो सबै घ,टनाको कारण आफ्नो प्रेमिकालाई नबनाउनु भन्दै पत्र लेखेका छन् । बरु म उसको लागि प्रा ण दिन सक्छु तर अनिशालाई केही नभन्नु भन्दै छोराले लेखेको पत्र देखाउँदै आमाले बलिन्द्र धारा आँ,शु बगाएकी छन् ।
तलको भिडियो हेर्नुस
यी हुन् बच्चा जन्माउने पहिलो पुरुष, तीन पटक भए
..त्यसपछि उनि प्रेमिकै घरमा पुगेकी थिईन….!
गर्भवती नर्स जसले आफ्नो नजन्मिएको बच्चासँगै साढे तीन वर्षका बच्चा र श्रीमानलाई छोडेर सदाको लागि यो संसार छाडिन्, अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियो भाइरल जसले सबैलाई रुवायो ! (भिडियो)
May 12, 2021 Bijay Lama
मेरो छोरालाई भेडा, बाख्रा भन्ने भन्दै बिमल माथि जंगीए सचिनको बुबा ! गरीब छौ भनेर नहेपे हुन्छ हेर्नुस…
नेपालमा अहिलेसम्मकै नौलो घटना : झण्डै पाँच अर्बबढीको यु’रेनि’यमसहित ४ जना पक्राउ
March 12, 2021 Bijay Lama